समय २०७७ सालमा आइपुग्नु तर नेतृत्व २०४६ सालकै वरिपरि घुमिबस्नु नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय अन्तरविरोध हो । यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो राजनीति र युगचेतनाको पुस्तान्तर तीस वर्षभन्दा धेरै छ । नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्ता आज भुत्ते र अर्थहीन भएको छ । आफ्नो कालखण्डमा यसले त्याग र संघर्ष गरेको थियो । तर दोस्रो पुस्ता ? योसँग त न त्यागको इतिहास छ, न भविष्य हाँक्ने इच्छाशक्ति ।
भाद्र ३०, २०७७ केशव दाहाल
राजनीतिको पुनर्गठन ठीक यही कथाजस्तै हो । बूढो, परित्यक्त र अर्थहीन राजनीतिमा आगो लगाउने र ताजा, ऊर्जाशील, नवीन राजनीतिको पुनर्जन्म गराउने । तर आगो लगाउने कसले ? आफैंमाथि निर्मम अग्निदाह गर्ने हिम्मत नेपाली राजनीतिमा कोसँग छ ? के दोस्रो पुस्ताले यो हिम्मत गर्छ ? अन्यथा राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रस्ताव एक अर्थहीन राग मात्र हो । दासताको राग गाएर स्वतन्त्रताको राजनीति किमार्थ हुँदैन ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ १८:५७